लोकदोहोरी गायिका टिका सानु - NEPALI KALAKAR
मेरा दुई शब्द
म सङ्गीतको अनुरागी । साङ्गितिक क्षेत्रमा आफ्नो अलग्गै पहिचान बनाउने लक्ष्य राखेको मान्छे । गीत सङ्गीत भने पछि हुरुक्कै, फुरुक्कै । अपसोच रहर, सपना र कल्पना भन्दा धन र समय बलवान हुँदो रहेछ । सपना सिरानी हालेर निदाएको मान्छे ब्युझने पलको प्रतिक्षा गर्दा गर्दै जिन्दगी सकिन लागिसकेछ । भलै मेरा सपना अधुरै किन नरहुन् मलाई सङ्गीतको नशाले कहिले छोडेन । आफ्ना सिर्जनामा ढुसी पलाए पनि मेरा वरपर गुन्जिरहने हर सङ्गीतले मलाई आनन्द दिइरहेको हुन्छ । म कलाकार त बन्न सकिन तर कलाकारको कलम बनेर सर्जक र सिर्जनाका बारेमा केही लेख्न चाहन्छु । मलाई सङ्गीतका सबै बिधा उतिकै मन पर्छ । बिशेष लोकदोहोरीमा बढी रुची राख्दछु । मेरी आमाले मलाई प्रत्येक पटक आशिर्बाद दिदा ठुलो कलाकार बनेस् भन्नु हुन्थ्यो । दु:खको कुरा मेरी आमाको सपना त पुरा भएन तर आज म जस्को बारेमा लेख्दैछु उहाँकी आमाको सपना भने पूरा भएको छ । आमा शब्द संँगको मेरो प्रेम र सम्मानलाई नै म पहिलो प्राथमिकता दिन चाहन्छु । आमाको खुशीका लागि ज्युने अनि आमालाई हसाउन पाए आफुलाई आनन्द मिल्ने चर्चित लोकदोहोरी गायिका टिका सानुको बारेमा केही लेख्दैछु । त्रुटी र गल्ती हुन पुगेमा अग्रिम क्षमा याचना गर्न चाहन्छु र भुल सुधार गर्नेछु ।
टिका सानुको जीवनका बारेमा केही लेख्नु पूर्व एउटा लघुकथा सुनाउन चाहन्छु जुन मैले कतै सामाजिक सन्जालमा पढेको थिए । बिहेको पहिलो रात श्रीमान श्रीमती बिच एउटा सर्त भयो कि जो सुकै आओस् ढोका नखोलिदिने । त्यही बेला श्रीमानको बा आमा आफ्नो छोरालाई भेट्न् भनी कोठामा आए र ढोका ढकढकाए । श्रीमान श्रीमतीले मुखामुख गरे । श्रीमतीको मन पनि नदुखोस् र सर्त पनि नतोडियोस् भनेर केटाले भित्रै बाट कुरा गर्यो । बा आमा ढोका बाहिर बाटै कुरा सकाएर फर्किए । अचानक श्रीमतीका बा आमा पनि आफ्नी छोरी सँग केही बेर कुरा गर्न भनी आए अनि ढोका ढकढकाए । श्रीमान श्रीमती मुखामुख गरे । दुबैले सर्त पनि याद गरे तर अनायासै श्रीमतीका आँखाहरु रसाउन थाले । बिन्ती गर्दै श्रीमानलाई भनिन् म मेरा बा आमालाई त्यसो गर्न सक्दिन । हत्तपत्त श्रीमतीले ढोका खोलिन् र बा आमालाई भित्र बोलाएर धेरै बेर कुरा गरिन् । समय बित्दै गयो उनीहरु जुम्ल्याहा छोराका बा आमा भए । छोराहरु जन्मिएकोमा श्रीमतीको खुशीको सिमा रहेन । केही बर्ष पश्चात यौटी छोरी पनि जन्मिइन् । छोरी जन्मिएको खुशीमा श्रीमानले सबै गाउँलेहरु भेला गरेर ठुलो भोज दियो । श्रीमतीले छक्क पर्दै सोधिन् – छोरा जन्मिदा वास्ता गर्नु भएन आज छोरी जन्मिदा यति ठुलो भोज किन ? मुस्कुराउदै श्रीमानले भन्यो – यही सन्तान हो जस्ले मलाई कुनै दिन ढोका खोलिदिनेछे । त्यसैले बुझी राखौ – छोरी भाग्यमानीको नसिबमा मात्र हुन्छ ।
साथीको विश्वाशघात र कानको रिङको कहानी
पारिवारिक साथ र सहयोग
सामाजिक नकरात्मक सोच प्रति गुनासो
साङ्गीतिक यात्राको सुरुवात
टिका बि क कसरी भइन् टिका सानु ?
टिका सानुको जीवनी बाट मैले सिकेका कुराहरु
प्रत्यक्ष दोहोरी मार्फत आफ्नो अलग्गै पहिचान बनाउन सफल लोकदोहोरी गायिका हुन् – टीका सानु । आँखामा आँखा जुधाएर जस्तालाई त्यस्तै दोहोरी सबाल जवाफ गर्न सक्ने क्षमता नै उनको प्रशंसाको बलियो पक्ष बन्यो । सामाजिक संजालमा उनलाई रुचाउने समर्थकहरुको सङ्ख्या दिनानु दिन बढ्दो छ । युट्युबमा उनका दर्जनौं प्रत्यक्ष दोहोरीहरु सुन्न र हेर्न पाइन्छ । औपचारिक रुपमा रेकर्ड भएका गीतहरुको सङ्ख्या पनि दर्जनौं पुगिसकेको छ । इन्द्रेणी कार्यक्रममा सहभागी भएर गरेका धेरै परोपकारी कार्यले उनलाई लोकप्रिय मात्र बनाएन कलाकारका साथै समाजसेवीको रुपमा समेत स्थापित गरिदियो । उनको सरल जीवनशैली, दयालु मन, निस्वार्थी सोच र अरुको दुखमा आफु मर्माहत हुने जस्ता गुणहरुले नै उनी करौडौ दर्शक श्रोताको ढुकढुकी बन्न पुगेकी हुन् । इन्द्रेणी कार्यक्रम मार्फत उनले आफ्नो गला र कलाको साहाराले राहत सङ्कलन गरी कैयौं रोगी, बिरामी, असहाय अनि दैबी प्रकोपमा परेका ब्यक्तिहरुलाई पुनर्जीवन दिने काम गरेकी छिन् । जस्तो अप्ठ्यारो स्थितिमा पनि मुस्कुराइरहने उनको बानीलाई इस्वरीय देन नै मान्न सकिन्छ । टिका सानुलाई केवल कलाकार मात्र भनेर सम्बोधन गरियो भने सायद अन्याय पनि हुन सक्छ । उनी कलाकारका साथै एक सच्चा समाजसेवी पनि हुन् ।
त्यति बेला टीका सानु कक्षा तीनमा पढ्दै थिइन् । उनले अध्ययन गर्ने बिद्यालयमा सरसफाई सम्बन्धी गीत प्रतियोगिता थियो । उनलाई जीत र हार भन्दानी गीत गाउने ठूलो रहर थियो । त्यसैले जानी नजानी सरसफाई सम्वन्धी गीत लेखिन् र सहभागी भइन् । उनी सबैभन्दा कान्छी प्रतियोगी पनि थिइन् । सौभाग्यवश उनी तृतीय हुन पुगिन् । यो सफलताले उनलाई नसोचेको खुशी दियो । यो खुशीको असली हकदार उनकी आमा हुनुहुन्थ्यो । एक त छोरी छोरी जन्माएकी भनेर सबै बाट अपहेलित त्यसै माथि अभावै अभावको जिन्दगी, तैपनि छोरीहरुका खुशीका लागि उहाँले न भोक न तिर्खा केही नभनी दिनरात मेहेनत गर्नु हुन्थ्यो । आमाको पिडामा मलम लगाउने सपना अनि थोरै भएनी आमालाई खुशी देख्ने चाहना टीका सानुको मनमा सानै देखि थियो किन कि आमाका पीडा र संघर्ष उनका आँखै अगाडि थिए । उनी आफ्नी आमाका आँखाका आँशु र दुखेको मनको प्रत्यक्षदर्शी थिइन् । छोरीले पनि आमाको आँशु पुछ्न सक्छन् भन्ने उनलाई लाग्थ्यो । उनको त्यो दिनको सानो सफलता सायद उनको लक्ष्यको एक आँकुरा पो थियो कि । उनी आफ्नो जिन्दगीको पहिलो पुरस्कार लिएर खुशी हुदै हतार हतार घर आइपुगिन् । आमा बारीमा लसुन गोड्दै हुनुहुन्थ्यो । आमाले पसिना पुछ्दै छोरीलाई नियाल्नु भयो । छोरीको मुहारको खुशी देखेर मुस्कुराउनु भयो । निधारमा अबिर अनि हातमा पुरस्कार लिएर उभिएकी आफ्नी सानी, लुरी, फुच्ची र प्यारी छोरीलाई देखेर आमा गौरवान्वित हुनुभयो । उनलाई हमेशा यसरी नै अघि बढ्न र मेहेनत गर्न नछोड्नु भनेर आशिर्वाद दिनुभयो । सायद तिनै सच्चा, ममतामयी आमाको आशीर्वादकै कमाल हुनुपर्छ आज टीका सानु सफलताको उच्च शिखरमा पुगिसकेकी छिन् ।
” यात्रा चप्पलमा तय हुदैन लक्ष्य सम्म पुग्ने अठोटमा भर पर्छ “
बैशाख जेठको महिना थियो । टीका सानु पर्सेनी देखि तुलसीपुर कार्यक्रममा भाग लिन जाँदै थिइन् । अचानक उनको चप्पलको तुना चुडियो । वरपर डोरी भेटिएन उनी नजिकैको आँपको बोटको छाहारीमा बसेर घाँसको डोरो बनाएर चप्पल लगाइन् । केही पर नपुग्दै त्यो पनि चुडियो । यसै त खपी नसक्नु गर्मी त्यसै माथि चर्को घामले तातेको पिच, खाली खुट्टा जान त सम्भव नै थिएन । उनले आफ्नो भाउजूको साडी लगाएर गएकी थिइन् । त्यही सारीको भित्री किनारा ( फलसा ) दाँतले च्यातेर उनले डोरी बनाइन् र चप्पल मर्मत गरिन् । त्यसो त बसको भाडा जम्मा पाँच रुपैया मात्र थियो त्यो पनि उनी सँग थिएन । उनी त्यै चप्पल लगाएर आफ्नो लक्ष्यमा अगाडि बढिन् त्यसैले त आज यो स्थान सम्म आइपुगिन् । यौटा भनाइ छ नि – तपाईं कुनै लक्ष्य लिएर हिड्नु भयो तर आधा बाटो नपुग्दै कुनै समस्या आयो भने कृपया नफर्कनुस् किन नि जति बाटो तपाईं घर फर्कन बाँकी छ त्यति नै बाटो हिड्दै अघि बढ्नु भयो भने लक्ष्यमा नै पुग्नु हुन्छ ।
एकपटक टीका सानू नेपालगन्जको कार्यक्रममा सहभागी हुन गएकी थिइन् । आफ्नी साथी पनि त्यही प्रतियोगितामा भाग लिन गएकी थिइन् । बेलुका सुत्ने बेलामा दुई जना साथीहरु बिच भोलिको गीतको विषयमा कुरा चल्दै थियो । उनले आफ्नी साथीलाई भोलि गाउनको लागि तयार पारेको गीत देखाइन् । भोलि पल्ट कार्यक्रम सुरु भयो । प्रतियोगितामा पहिला उनकी साथीको पालो र त्यस पछि लगत्तै टीका सानुको पालो थियो । विडम्बनाको कुरा उनले जुन गीत तयार पारेकि थिइन् उनकी साथीले त्यै गीत पो गाइदिइन् । टीका सानु छक्क परिन् । आफुले बिश्वास गरेर गीत देखाउदा उनकी साथीले त्यही गीत नै गाइदेलिन् भन्ने अपेक्षा बिलकुलै थिएन । लगत्तै उनको पालो भएको कारण उनी हडबडाइन् र हतार हतार अर्को गीत बनाइन् तर सोचे जस्तो गीत तुरुन्तै तयार पार्न सकिनन् फलस्वरूप उनकै गीत गाएर उनकी साथी दित्तिय भइन् र उनी रित्तै हात फर्कनु पर्यो । दुखको कुरा उनी सँग बस भाडा पनि थिएन अनि आफ्नो नाकको फुली बेचेर उनी आफ्नो घर फर्किइन् ।
भलै उनको परिवार आर्थिक सङ्कट बाट गुज्रिएको भएता पनि उनलाई पारिवारिक माया, ममता र हौसलाको भने कुनै कमि थिएन । विशेषत: उनकी आमा उनको सबैभन्दा ठुलो प्रेरणाको श्रोत हुनुहुन्थ्यो । साङ्गितिक क्रियाकलापमा उनका बाबा रुष्ट भए पनि आमा भने हरपल उनलाई प्रेरित गरिरहनु हुन्थ्यो । आज कतै कार्यक्रम छ भन्ने थाहा पाउना साथ छरछिमेकमा गइ रोइ कराइ सरसापट गरेर उनका लागि खर्च जुटाइदिनुहुन्थ्यो । हिजो आफुले यसरी अभावमा पनि धैर्यताका साथ अडिग भएर आफ्नो लक्ष्य प्रति केन्द्रित हुन सक्ने खुबीकै कारण आज टीका सानू धेरै गरीब, असहाय, बिरामी र दैबीप्रकोप पीडितको आशाको केन्द्रबिन्दु बन्न पुगेकी छिन् । आफ्नो कला र गला देखाउदै स्वदेश बिदेशका विभिन्न ठाउँ र कार्यक्रममा संलग्न भइ राहत सङ्कलन गरी त्यस्ता ब्यक्तिहरुको उद्दार कार्यमा लागिरहेकी छिन् ।
समाजमा विभिन्न सोच भएका मानिसहरु भेटिन्छन् । कुरिती, अन्धबिस्वास जस्ता कुराहरुले गाउँघर बिशेष प्रभावित छ । आफु हुर्केको समाज र त्यँहाका केही ब्यक्तिहरुलाई सम्झेर टिका सानुलाई कैले काही गुनासो गर्न पनि मन लाग्छ किन कि उनीहरुले आफ्नी आमालाई छोरी मात्र जन्माएकी भनेर सधैं हेला गर्थे । छोरा जन्माएर पनि बचाउन नसकेको भनेर कुरा काट्थे । कसै कसैले त छोरी मात्र जन्मने कोख रैछ भनेर खिल्ली उडाउथे । आफ्नो बाबालाई एकान्तमा बोलाएर यसलाई छोडेर अर्को बिहे गर भनेर समेत सल्लाह दिने गर्थे । जुन कुराले टीका सानुलाई मर्माहत बनाउथ्यो । त्यही समाजको लागि पनि आज टीका सानु एक उदाहरण बनेकी छिन् । छोरीले पनि बाबा, आमा, समाज र राष्ट्रको नाम राख्न सक्छिन् भन्ने कुराको प्रमाण हुन् टीका सानु । त्यसैले छोरीलाई पनि सकारात्मक दृष्टिकोणले हेरिनु पर्छ भन्ने उनको मान्यता छ ।
टिका सानुको परिवारिक वातावरण नै सङ्गीतमय थियो । बाबा आमा दुबै गीत गाउनमा माहिर हुनुहुन्थ्यो । गाउँमा पुजापाठ नाचगान हुदा बाबा र आमा दुई समुहमा बिभाजित भएर दोहोरी गाउनु हुन्थ्यो । आमाको नजिकै बसेर दोहोरी सुनिरहेकी टिकाको मनमा आफुलाई पनि यस्तै गीत गाउने रहर जागिरहन्थ्यो । उनकी आमाको आवाजको चर्चा परिचर्चा काठमाडौ सम्म पुगेछ । केही सङ्गीतप्रेमीहरुले उनकी आमालाई काठमाडौ आउन आग्रह पनि गरेका थिए रे तर आफ्नी छोरीहरुलाई छोडेर नजाने भन्नुभयो रे । त्यसो त उतिबेला काठमाडौलाई धेरै टाढा सोचिन्थ्यो रे बिदेश जस्तै । आफू नहुदा आफ्नी छोरीहरुले दुख पाउलान् भन्ने पिरले उहाँ काठमाडौ जान सक्नु भएन । सायद आमाको यहि ममता र त्यागकै कारण आज उनी राजधानी पुगेर सबैको मनमा जमेर बस्न पाएकी छिन् ।
उनी सानै देखि गाँउमा दाउरा घाँस गर्दा उकाली ओरालीमा गुनगुनाइरहन्थिन् । स्कुलका कार्यक्रममा होस् या घरमै या त साथीभाई सँग होस् समय मिल्ना साथ उनी गाउन सुरु गरिहाल्थिन् । उनको साङ्गीतिक यात्रा भने सल्यानको गाउँ बेशी रेडियोको जन्मोत्सव मा गाएको दोहोरी बाट सुरु भएको थियो ।
हिमालय एकेडेमीको बिज्ञापनका लागि रेकर्ड गरिएको गीत नै उनको साङ्गीतिक यात्राको पहिलो औपचारिक रेकर्ड गीत बन्न पुग्यो । पहिलो गीत रेकर्ड हुदा उनी यति खुशी थिइन् कि आफुले गाएको गीतको रिङ्टोन झन्डै दुई तीन महिना सम्म दोहोराइ तेहेराइ सुन्ने गर्थिन ।
यति राम्रो अन्त कहाँ होला
हिमाल एकेडेमी मै आउनु है
सबै कुरा यतै थाहा होला !!!
लजाउने रैछ नि बानी
बस्मा रैछौ का सम्म हो जानी !
रुमाल चिनो साटम मायालु
तिमी पाल्पा म जाने दाङ घोराही बुटवल बाट फाटम मायालु !!!
बिहान देखि बेलुका सम्म भन्छु कामै काम
तर पनि खुशी हुन्नन मेरी सासू आमा
माइतीको प्यारो हुने बे गरेर रैछ
घरको प्यारो हुने के गरेर रैछ !!!
केलाई गर्नु तेरो मेरो के छ मरी लानु !
त्यसैले त हासी हासी बोल्छे टीका सानू !!
दर्शन हजुर दर्शन
गुन्युचोली लाउछु दोहोरी गीत गाउछु सबले माया गर्छन् !!!
नमिठा पलहरु :
दोहोरी साझमा काम गर्दै गर्दा एक साझ जब उनी दोहोरी साझको गेट मै पुगेकी थिइन् तब एक अपरिचित युबकले उनलाई यहाँ एक रातको लागि केटि पाइदैन ? भनेर सोधे पछि उनलाई धेरै नरमाइलो महसुस भयो । आफुले सम्मान र पूजा गर्ने पेशालाई उस्ले गलत सम्झिदिएकोमा उनी दुखी भइन् । उनी भन्छिन् दोहोरी साझ गायक गायिकाको लागि मन्दिर हो, पाठशाला हो ।
हरेक क्षेत्रमा राम्रा नराम्रा दुबै थरी मान्छे हुन्छन् । कति अग्रज र अभिभावकले अवसर नपाएकाको प्रतिभा पहिचान गरी मौका दिन्छन् भने कतिले फेरि नबोदित कलाकारको कम्जोरी पहिचान गरी सहयोग गर्ने बाहनामा गलत फाइदा उठाउने कुदृष्टी पनि राख्ने गर्दछन् । टीका सानुलाई पनि यस्तै ब्यक्तिको सामना गर्नु पर्यो । गीत रेकर्डिङ गराइदिने, दैनिक खर्च हेरिदिने, फ्ल्याटमा राखिदिने, फेसन अनुसारका लुगा किनिदिने अनि अहिले भोगेको जिन्दगी भन्दा माथिल्लो स्तरको जिन्दगी बिताउन पाइने जस्ता प्रलोभन देखाएर एक बिबाहित अधबैंसे पुरुषले आफू सँग अबैध सम्बन्ध राख्न प्रस्ताव राखे जुन कुरालाई उनले चेतावनीका साथ नकारिदिइन् । उसको त्यो स्वार्थी आश्वासन र निच सोचले टीका सानुलाई धेरै दिन सम्म दुखी बनाइरह्यो । टीका सानु आफ्नो सरल जीवन शैलीमै रमाउछिन् किन कि उनी आबस्यकता भन्दा बाहिर जादिनन् । अति आबस्यक कुरालाई मात्र पूर्ति गर्नु पर्छ भन्ने उनको मान्यता छ ।
टीका सानुको पारिवारिक स्थिति साह्रै कम्जोर भैसकेको थियो । यो अबस्थालाई सुधार गर्नका लागि उनकी आमा परदेश जानु भयो जति बेला उनी कक्षा सातमा पढ्दै थिइन् । आमाको साथ बिना आफ्नो लक्ष्य अधूरो रहने डरले उनी निकै दुखी भएकी थिइन् ।
टीका सानुको बाबाले छोरी छोरी जन्मिएकै कारण अर्को बिहे गर्नु भयो । यही कुराले टिका सानुलाई नरमाइलो लागिरहन्छ ।
झमझम पानी परेको रात बोलको गीतमा गाएको यौटा प्रत्यक्ष दोहोरीमा प्रसङ्ग अनुसार अगाडि बढ्दै जादा केहि उच्छृङ्खल शब्दहरुको प्रयोग गरेकी भन्दै उनका समर्थकले गुनासो गरेपछि उनलाई आफ्नो गल्ती महसुस भयो र पश्चात्ताप पनि ।
खुशीका क्षणहरु :
टीका सानुका लागि दोहोरी प्रतियोगितामा प्रथम हुनु खासै नौलो नै कुरा त हैन तर 2072 सालमा दाङ जिल्लाको घोराही महोत्सवमा प्रथम हुदाको खुशी भने अलग्गै छ । घर देखि नजिकैको मेला भएकोले आफ्ना परिवारका सबै सदस्य तथा छरछिमेकका आफ्ना आफन्त सबै जनाको साथमा प्रत्यक्ष दोहोरी गाउन पाउनु उनका लागि खुशीको कुरा बन्न पुग्यो ।
2075 साल पुष तेह्र गते तमु ल्होसारको अवसर पारेर गुरुङ समाजले आयोजना गरेको खुल्ला राष्ट्रब्यापी लोक दोहोरी प्रतियोगितामा प्रथम भएको पल पनि उनका लागि अबिष्मरणिय बन्न पुग्यो ।
आफ्नी आमा परदेश नफर्कने गरी स्वदेश फर्केको दिन उनका लागि सबैभन्दा ठुलो खुशी हुन पुग्यो ।
टिका सानुलाई तीन वटा कुराले सधै भाबुक बनाउछ । गरिबी, जातिय विभेद र छोरा छोरीमा भेदभाब । यी बिषयमा कसैले फरक व्यबहार गरेमा उनका आँखा छिट्टै रसाउछन् । जब उनी पहिलो पटक इन्द्रेणीको कार्यक्रममा अतिथी कलाकार बनेर सहभागी भएकी थिइन् त्यहाको माहोलले उनलाई धेरै भाबुक बनायो । जब कृष्ण कंडेलले आपत बिपतमा परेका असहाय, पीडित र बिरामीहरुको बारेमा बोल्न थाल्नु भयो तब उनले आफ्नो मन थाम्नै सकिनन् त्यो दिन सम्म आफ्नो दु:खलाई ठुलो सम्झने टिकाको मनमा त्यो दिन सबैको दु:ख र अप्ठ्यारोको यथार्थ महसुस भयो । जिन्दगीको लागि गरिएका अपिलहरुले उनलाई आंँशु झार्न वाध्य बनायो । उनीहरुका सामु आफ्नो दु:ख संघर्ष केही जस्तो नि लागेन । त्यो दिन सम्म टिका सानु आफ्नो परिवारका लागि सोच्थिन् भने त्यो दिन देखी सबैका लागि सोच्न पर्दो रैछ भन्ने महसुस गरिन् । पिलपिल आंँशु बगाउदै गरेकी टिका सानुको कोमल मन र उदार भावना देखेर कृष्ण कंडेलको मनमा आशाको दियो बल्न थाल्यो । उहाले सम्हाल्दै आउनु भएको परोपकारी काममा हातेमालो गर्ने अर्को दयालु मन थपिएको आभाष भयो उहालाई । अरुको दु:खलाई महसुस गर्न सक्ने र अरुको चोटमा आंँशु बगाउन सक्ने यो कलाकार नै इन्द्रेणीको लागि योग्य सम्झेर इन्द्रेणी समुहको सदस्य बन्न आग्रह गर्नु भयो ।
इन्द्रेणीको आशालाग्दो ती प्रतिभा आज राष्ट्रको गहना बनिसकेकी छिन् । उनले इन्द्रेणीकै आगनमा कैयौ दोहोरीहरु गाइन् । लाखौं करौडौ दर्शक श्रोताको मन जित्दै गइन् । उनले आफुले चर्चा कमाउनकै लागि मात्र गीत गाइनन् इन्द्रेणी समुह सँग सहकार्य गर्दै नेपालका बिभिन्न दुर्गम गाउँ ठाउँ पुगेर राहत सङ्कलन गरी असहाय, बिरामी, दैबीप्रकोप पीडितलाई पुनर्जीवन दिने काम पनि गरिन् ।
टीका बि.क. सानै देखि शारीरिक रुपमा लुरी र फुच्ची थिइन् । कुरा त्यो बेलाको हो, जुन बेला सल्यानको गाउँबेशी रेडियोको जन्मोत्सवको उपलक्ष्यमा आयोजित दोहोरी प्रतियोगितामा उनी पनि सहभागी थिइन् । झन्डै चवालीस समुहहरु सहभागी थिए । उनी सबै प्रतिष्पर्धीहरु मध्य सानी र फुच्ची थिइन् । जब दोहोरी सुरु भयो उनको दोहोरी सबाल जवाफ सुनेर सबै छक्क परे । अतिथिहरु अनि निर्णायक मण्डल सबैले उनको खुलेर तारिफ गरे । त्यति सानी मान्छेले नि यति मीठो गाइन् भनेर सबैले माया गरेर सानु सानु भन्न लागे । त्यस पछिका हरेक प्रतियोगितामा उनलाई सानु नामले नै सम्बोधन गर्न थालियो । उनले यो नामलाई मायाको अमुल्य चिनो सम्जझिन्थिन् । अन्ततः त्यै सानु नाम जोडिएर आज उनी टीका सानु भएकी छिन् । सबैको मनमस्तिष्कमा बस्न सफल प्यारो नाम – टीका सानु ।
भबिष्य कसैले पनि देखेको छैन तैपनि उनी समयले साथ दिए सम्म जिन्दगीको अन्तिम पल सम्म नि सङ्गीतलाई नै प्राथमिकता दिनेछिन् । उनी भन्छिन् – दाम त दुई नम्बरी काम गरेर नि कमाइन्छ तर दुख र संघर्ष बाट कमाएको नाम सदैव सबैको मनमा बसिरहोस् यही चाहना छ ।
सङ्कटको समयमा पनि धैर्य रहनु पर्दो रैछ । सफलताका लागि आत्मबिश्वास भन्दा ठुलो शक्ति केही रहेनछ ।
सरल जीवनशैली अपनाउने र महत्वकांक्षी सोच नहुने ब्यक्तिको स्वाभिमानलाई कसैको प्रलोभनले खरिद गर्न सक्दो रहेनछ ।
जिन्दगी आफ्ना लागि भन्दा पनि अरु (असहाय दुखी पीडित ) का लागि ज्युदा आन्त्मसन्तुष्टी मिल्दो रहेछ ।
त्यै ब्यक्ति सदाबहार प्रिय भैरहदो रहेछ जुन ब्यक्ति सदैब एकैनाश रहिरहन्छ ।
अवसरले हामीलाई खोज्दै आउँदैन हामीले अवसर खोज्दै जानु पर्छ ।
भाग्य र पालो सबैको आउछ कर्म गर्न छोड्नु हुँदैन ।
आमा भन्दा अमुल्य चिज कुनै रहेनछ ।
बिभिन्न युट्युबमा टिका सानुले दिनु भएका अन्तर्वाताका आधारमा तयार पारिएको ।
(धेरै जसो उहाँको अन्तर्वाता सुनेर आँसु झारेको पनि छु )
18 thoughts on “लोकदोहोरी गायिका टिका सानु”
भाई प्रियकुमार सार्है मर्माहित कहानी मनै छोयो । टिका सानु तिमी सबैको प्रेरणाको स्रोत हौ। आगामी दिनमा अरु सफलताको कामना गर्दछु।
सहृदय दाजु धन्यबाद । सुझाव, हौसला र प्रतिक्रियाको लागि आभारी छु ।
पर्दामा कलाकारहरू खुसी देखिन्छन तर वास्तविक जिबनकथा अत्यान्तै पिडादायी हुन्छ । धेरै पटक टीका सानु गीत गाउंदा गाउंदै रोएको मैलेपनि देखेको छु । मन छोयो।संघर्षले नै सफल बनाउछ मान्छेलाई,हार खानुहुन्न।यस्तै बास्विक जिबनका कथाहरु अरू धेरै पढ्न पाउँ..
यहाँ सम्म आएर हौसला र प्रेरणा रुपी यी सल्लाह सुझावका लागि बिशेष आभार प्रकट गर्दछु ।
टीका सानुको जिवनी पढ्न पाउँदा खुशी लाग्यो । टीका सानु जस्ती छोरी जन्मिदा नि छोरा खोज्ने उहाँका बाबालाई धिक्कार छ ।
जीबन सड्घर्स हो दुखले बुझेको मन्छेनै प्रेरनाको स्रोत बन्छन ! अक्सर जीबन सहज छैन बुझेर अनी सफल हुनु भयो टीका सानु जी तपाइ जस्ता मान्छेको कमी धेरै छ ! हाम्रो समाजमा अगी बड्दै जानुस सुभकामना तपाइलाइ जय गीत सड्गीत 🙏🙏
हजुरको सकरात्मक प्रतिक्रियाको लागि हृदय देखी धन्यवाद !
समाज प्रति नारीको पनि ठुलो योगदान छ भन्ने कुरा बुझाउन बाँकी छ शायद अझै । हजुरको प्रतिक्रियाको कदर गर्दछु ।
Great Singer Tika Sanu
धन्यवाद हजुर !
टीका सानुको लाइभ दोहोरी त धेरैले हेरियो तर यसरी बिस्तृत जीवनी पढ्न पाउँदा खुशी लाग्यो । मेरो मन पर्ने गायिका टिका सानु ।
यकदम मर्मस्पर्शी बास्तबिक टीका बहिनी को संघर्षमय जीवन कथा पढ्नपाउदा दु:ख र खुसि दुबै लाग्यो ।दुख यो मानेमा लाग्यो कि उहाँको जीवन यकदम दु:ख र कस्टकर बितेछ तर आज त्यहि संघर्ष को कारण सफल कलाकार हुनुभयको छ।संघर्षरत जीवन नै सफल र टिकाउ हुन्छ
हजुरको सकरात्मक प्रतिक्रियाको लागि सहृदय धन्यवाद !!!
Тут можно прочитать про Coronavirus Covid-19, а ещё интересно написано про симптомы коронавируса у детей
Proud of you Tika Sanu
टिका सानुको फ्यान यता हाजिर हुम त ।
Love u Tika Didi